Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Ihe ọghọm kacha egbu egbu na Taiwan
Na-agbasa News Travel • News • Safety • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Taiwan bụ ihe mberede okporo ụzọ kachasị njọ nke mba China a nkewapụrụ ma ọ dịkarịa ala, ihe dị ka mmadụ iri atọ na isii nwụrụ na ọdụ ụgbọ mmiri a.
Ebe ndị mmadụ bi na-ebugharị na mpaghara ọwụwa anyanwụ na mpaghara China dịpụrụ adịpụ nke Taiwan na-ewu ewu na ndị njem nleta, ọtụtụ n'ime ha na-abata n'okporo ụzọ ụgbọ oloko dị n'ụsọ oké osimiri iji zere ụzọ ugwu dị aghụghọ.
Traingbọ okporo ígwè ndị njem nwere ihe karịrị ndị njem 400 kụkasịrị n'ime ụgbọ na-aga n'okporo ụzọ ya ma kwapụ ụzọ nke ọzọ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị na Taiwan na Fraịdee.
Ọ dịkarịa ala, mmadụ 36 nwụrụ ma merụọ ọtụtụ ahụ. Ndị lanarịrịnụ na-arịgo na windo na n'elu ụlọ iji nweta nchekwa na ọdụ ụgbọ okporo ígwè kachasị njọ n'àgwàetiti ahụ n'ime ọtụtụ iri afọ.
Ndị lanarịrịnụ na-arịgo na windo na n'elu ụlọ iji nweta nchekwa na ọdụ ụgbọ okporo ígwè kachasị njọ n'àgwàetiti ahụ n'ime ọtụtụ iri afọ.
Ihe mberede a dakwasịrị na nso Toroko Gorge ebe mara mma gburugburu elekere 9 nke ụtụtụ n'ụbọchị ezumike ọha, ndị isi na mpaghara Hualien kwuru na mbọ nzọpụta na-aga n'ihu. Ndị mgbasa ozi kwuru na ihe karịrị ndị njem 400 nọ n'ụgbọ ahụ.
Akụkọ kwuru na gwongworo ma ọ bụ ụfọdụ ụdị ọrụ ụgbọ na-ada site na ugwu wee daa na egwu ahụ, ebe ụgbọ oloko na-esi n'olulu gbawara n'ime ya. Ka ọtụtụ ụgbọ oloko ahụ ka tọrọ n'ime ọwara ahụ, a manyere ndị njem gbapụrụ ịgbatị ọnụ ụzọ, windo na elu ụlọ iji ruo nchekwa.
Apparentlygbọ ala ahụ kụrụ mgbe locomotive ahụ pụta, na-akpata mbibi kachasị njọ nke ụgbọ ala 1-5, dị ka ngalaba nnapụta nke mpaghara Hualien.
Ihe onyonyo telivishọn na foto ndị mmadụ zipụrụ na ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ gọọmentị etiti Central gosiri na ndị mmadụ na-arịgo n'ọnụ ụzọ mepere emepe nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị n'èzí n'ọnụ ụzọ ọwara ahụ. N'ime otu ụgbọ ala ka eburu ụzọ banye n'akụkụ oche dị n'akụkụ ya.
Ihe ọghọm a bịara n’ụbọchị nke mbụ nke ụbọchị anọ a na-eme emume Tomb Sweeping Festival, bụ emume okpukpe a na-eme kwa afọ mgbe ndị mmadụ na-aga obodo ha maka nnọkọ ezinaụlọ ha na iji fee ofufe n’ebe a na-eli ndị nna nna ha.
Taiwan bụ agwaetiti ugwu ugwu ebe ihe ka ọtụtụ n’ime nde mmadụ iri abụọ na anọ ya na-ejupụta n’ala dị larịị n’ebe ugwu na ọdịda anyanwụ. Ebe ọwụwa anyanwụ jupụtara na mpaghara bụ nke ndị njem nleta na-ewu ewu, ọtụtụ n'ime ha na-abịa n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị n'ụsọ oké osimiri iji zere ụzọ ugwu dị aghụghọ.
Usoro ụgbọ oloko buru ibu nke Taiwan emeela nkwalite dị ukwuu na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọkachasị na mgbakwunye nke usoro ọsọ ọsọ na-ejikọ isi obodo Taipei na obodo ndị ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ na ndịda.